Ny volana oktobra no nisy lehilahy nilaza ho manana merikiora 3 kilao tao Ambositra. Fikambanana mpivarotra miisa 6 no liana ka nanambatra vola mitentina 7.000.000 ariary nalefa tamin’ny finday hanaovana sorona. Voalaza fa alaina any Ambositra ny entana, ary nasainy nitondra vola 3.600.000 ariary. Nony nifampihaona ireo telo avy samy iraka, ka rehefa natolotra ny vola dia nanjavona ireo avy any Ambositra, tsy nandeha koa ny laharana findainy. Ny alin’ny talata 24 desambra dia nandeha ilay finday, ka nilaza indray ireo mpisoloky fa efa vonona ilay merikiora. Nidina tany an-toerana indray ireo solontenan’ny mpividy ny alarobia 25 desambra, ka nahita lehilahy 2 nilanja kitapo lehibe iray, voalaza fa misy ilay merikiora, fa mila vola indray hanaovana fomba alohan’ny hivarotana azy. Niaraka niakatra taty Antananarivo ireo roalahy sy ireo mpividy. Ny alatsinainy teo ary dia efa nahita mpividy ilay merikiora, efa vory ihany koa ilay volabe nangatahin’ireo roalahy tompon’entana hanaovana fomba. Fa mila tapakazo iray ka tany am-pitadiavana izany no nanjavona izy roalahy fa tratra ihany teo Mahamasina tamin’ny 02 ora tolakandro n’io alatsinainy io,